Livestock and Fish Breeding Work - Ngwe Pinlae Livestock Breedings & Fisheries Co.,Ltd.
/ Livestock and Fish Breeding Work
Livestock comprises Fishery (Maubin) and Farming (Baw Lal Kyun). Fishery (Maubin), expand an area of 1663.27 acres, is located in Maubin Township, Maubin District, Ayeyarwady Region. In which Rohu, Katla, Mrigal are being stocked.
မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသည် ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း(မအူပင်)နှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း (ဘောလည်ကျွန်း)တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း(မအူပင်)သည် ၁၆၆၃.၂၇ဧက ကျယ်ပြန့်ပြီး ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင်၊ မအူပင်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး ငါးမြစ်ချင်း၊ ငါးခေါင်းပွ၊ မြက်စားငါးကြင်း စသည်တို့အား ဈေးကွက်ဝင်ငါးများ မွေးမြူလျက်ရှိပါသည်။
Livestock and Fish Breeding Work Gallery